Himalaya Dainik » आज राति १ बजेर ५८ मिनेट देखि चम्किदैछ यी ४ राशिको भाग्य
आज राति १ बजेर ५८ मिनेट देखि चम्किदैछ यी ४ राशिको भाग्य
शुक् ग्रह सौर्य मण्डलमा सूर्यबाट दोस्रो ग्रह हो। यस ग्रहको सतह चट्टानले बनेको छ र यसको वायुमण्डल कार्बन्डाईअक्साइड् र बिषालूसल्फ्युरिक् एसिडले बनेको हुन्छ।
पृथ्वीको सामान्य तापक्रममा सल्फ्युरिक् एसिड तरल अवस्थामा हुन्छ तर शुक्र ग्रह यती तातो छ की शुक्र ग्रहमा भएको सल्फ्युरिक एसिड वाष्पीकरण भएर ग्यासको रूपमा पाइन्छ। हरित गृह प्रभावका कारण यो ग्रह सौर्य परिवारको सबै भन्दा तातो ग्रह बनेको छ जसका कारण पृथ्वीमा बस्ने कुनै पनि सजीव वस्तु त्यहाँ जीवित रहने कुरै भएन।
वायुमण्डलमा रहेको बाक्लो बादलका कारण यस ग्रहको सतह राडारको सहायताले मात्र पहिल्याउन सकिन्छ। शुक्र ग्रह आकारमा पृथ्वीभन्दा अलिकति मात्र सानो छ । पृथ्वीको व्यास १२ हजार आठ सय किलोमिटर छ भने शुक्रको व्यास १२ हजार १०२ किलोमिटर छ । शुक्र ग्रह सूर्यबाट १० करोड ८२ लाख आठ हजार नौ सय किलोमिटरको दूरीमा छ ।
यसले सूर्यलाई एक पटक घुम्न आठ महिना अथवा २२४ दिन १६ घण्टा लगाउँछ । सूर्यबाट नजिका हुनाले यसको सूर्यपट्टि फर्केको सतह निकै तातो हुन्छ । यो ग्रहको सतहमा चार सय डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम हुने कुरा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् ।
यस ग्रहलाई अङ्ग्रेजीमा वेनु (Venus) भनिन्छ जुन रोमन माया र सुन्दरताकीदेवी वि नसको नामबाट राखिएको हो। शुक्र ग्रह पृथ्वीको आकाशबाट प्रायजसो सधैँ देखिन्छ तर बिहान सबेरै र सूर्यास्तको केही क्षण पछि राम्रो सँग देखिन्छ।
साँझमा पश्चिम दिशातर्फको आकाशमा अलिक माथि हेरेको खण्डमा निकै चम्किलो आकासिए पिण्ड देखिने छ । एकनासले प्रकाशित भइरहेको त्यो पिण्ड नै शुक्र ग्रह हो ।
१) मिथुन राशि २) कन्या राशि ३)मीन राशिल ४) धनु राशि
बाँकि भिडियमा हेर्नुहोस
केकी अधिकारीको नयाँ ‘लुक्स’ भाइरल
१६ वर्ष पहिला हराएको हिराको औंठी गाजरले लगाएको भेटिएपछि…
सदाबहार सुन्दरी रानी मुखर्जीको सुन्दरता, हेर्नुहोस् १२ तस्विर
पार्टीको नाम फेर्दै माओवादी केन्द्र !
आँखा सुक्खा हुन नदिन डा. ज्योति लामिछानेका ‘बीस-बीस-बीस’ सूत्र !
कञ्चनपुरमा ‘अप-हरण’मा परेकाे नाटक गर्दै प्रेमीसँग मस्त १४ वर्षीया बालिका !